Online Chat | Tendrombohitra goavam-be, Tendrombohitra Jizera, Paradisan'i Bohemia
Amin'ny famakiana an'ity fampiharan-dresaka ity, dia tafiditra amin'ny fampivoarana ny tsiambaratelo artificielle ianao. Ho lasa tsy mety maty!
Intelligence Artificial Intelligence (Artificial Intelligence, AI) dia siansa momba ny ordinatera manokana amin'ny famoronana milina mampiseho marika manan-tsaina. Ny famaritana ny "fitondran-tena mahira-tsaina" dia mbola resaka ifanakalozan-kevitra, izay matetika no ampiasaina ho fenitra amin'ny faharanitan-tsaina amin'ny alalan'ny sainan'ny olombelona. I John McCarthy no tonga voalohany tao amin'ny 1955.
Fahaizana artifisialy fikarohana dia tena ara-teknika sy manokana, koa, dia mizara ho saha maromaro, izay matetika tsy afaka mitambatra hevitra. Ny fikarohana ihany koa manontolo Mizara ho maro ny olana ara-teknika; Ny sasany subfield fifanarahana amin'ny olana azo ampiharina, ohatra, ny sasany mitodika any amin'ny fampiasana ny fitaovana manokana na hanatratra fampiharana manokana. Ny fanontaniana dia hoe raha azo atao ny fanamboarana solon-tsaina ihany koa ny mifandray akaiky amin'ny olana ny fahatsiarovan-tena, miaraka amin'ny resaka kajikajy ataon'ny atidoha mihitsy ny olombelona, ​​na ny fanontaniana ny fivoaran'ny fahaiza-fandroson'ny ara-pahalalana. Toy izany koa Miteraka itondrany an'ireo filozofia ny solon-tsaina.
Ny tena olana eo amin'ny fikarohana Anisan'ny fahaizana artifisialy Fandresen-dahatra, ny fahalalana, drafitra, fianarana, fiteny voajanahary fanodinana (fifandraisana), fomba fijery sy ny fahafahana hifindra sy fitaovana zavatra. Fanatrarana ankapobeny ny faharanitan-tsaina dia mbola iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny fikarohana ao amin'io sehatra io.
Artifisialy neural tambajotra amin'ny solon-tsaina dia manana ny fomba fitondran-tena mifanaraka niteraka rafitra. Izy ireo ahitana ny kajy amin'ny solosaina, modely ny Mason'ny izay mampita famantarana amin'izy samy izy, ary hanova azy ireo mampiasa ny famindrana fiasan'ny hafa "Mason'ny".
Genetic fandaharana dia tsy miteny fotsiny ho fitaovana ho an'ny famahana olana ny solon-tsaina, fa ny fomba fandaharan'asa ankapobeny, izay raha tokony nanoratra manokana ho an'ny famahana algorithm io asa io ny mitady fomba dingana mino ny evolisiona.
Ny manam-pahaizana rafitra dia programan'ordinatera izay manana ny asa ny manome manam-pahaizana torohevitra, fanapahan-kevitra na fahazoan-dalana hidirana manokana vahaolana situaci.Expertní rafitra dia natao mba afaka handamina tsy numeric sy tsy mazava ny vaovao mba hiatrehana ny asa izay tsy ho voavaha amin'ny alalan'ny nentim-paharazana algorithmic fomba fiasan'ny.
Ny fianarana milina dia ampahany amin'ny intelligence artificial, mifandray amin'ny algorithm sy teknika izay mamela ny rafitry ny solosaina 'hianatra'. Amin'ny fianarana ao anatin'izany toe-javatra izany, dia midika izany fiovana izany eo amin'ny toeran'ny rafitra toy ny fampifanarahana tsara kokoa amin'ny fiovan'ny tontolo iainana.